नेकपा जिल्ला एकता : कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च छाडेर किन हिँडे माधव नेपाल ? – Himshikharnews.com
नेकपा जिल्ला एकता : कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च छाडेर किन हिँडे माधव नेपाल ?
१० बैशाख २०७६, मंगलवार ०८:१३
मञ्चको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीका दिवंगत नेताहरू र लेनिनको तस्बिर थिए । आफैं उपस्थित हुने मञ्चहरूमा अध्यक्षहरूका मात्र ठूल्ठूला तस्बिर राख्ने परिपाटीको नेता नेपाल लगायतले आलोचना गर्दै आएका छन् , कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
जिल्ला नेतृत्वमा पूर्वएमाले पक्षमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरको हिसाबकिताब भएको थियो । पूर्वएमालेले पाएको ४४ वटा अध्यक्षमा २८ जना ओली र १६ जना नेपाल पक्षधर परेका छन् । सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको ३३ स्थानमध्ये २२ जना नेपाल र ११ जना ओली पक्षका परेका छन् । अध्यक्ष र सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको कुल ७७ पदमध्ये ३९ जना ओली पक्ष र ३८ जना नेपाल पक्षका परेका छन् ।kantipurdaily.com